/Blog/garari/Synephrine HCL Powder - Mafuta anopisa uye uremu Wekuwedzera huremu
Posted on 11 / 25 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Nhasi, chikamu chikuru chehuwandu hwevanhu chiri kutsvaga nzira dzekuchengetedza huremu hune hutano. Zvakanaka, pakati pavo vese, kushandiswa kwe Synephrine HCL powder imwe yedzimwe nzira dzakachengeteka dzaungachengeta asina hutano mafuta kune bay. Synephrine poda ndeye alkaloid kemikari yemakemikari iyo isingawanzo kuwanikwa. Icho chinhu chechisikigo chinowanikwa mune zvinomera svinwa inovava, pakati pevamwe.
Synephrine's poda yemolekyum yakafanana neiyo ephedrine, inova imwe yemafuta akakurisa-kupisa zvikamu. Nekudaro, Ephedrine haisisiri mumusika sechinhu chinowedzera chekudya; saka, Synephrine ndiyo yakanyanya kutsiva. Octamine ndiyo Synephrine's metabolite uye kusvika ikozvino yave nemukurumbira nekuda kwemafuta ayo anopisa zvivakwa.
Synephrine isimba risina kusimba re alpha-1 uye alpha-2 adrenoreceptors. Izvo zviviri basa nekupindura adrenaline saka inowedzera imwe yeropa uye chiyero chemwoyo. Nekudaro, Synephrine 5985-28-4 haigone kukonzeresa kuwedzera mwero wemoyo wako kana kumanikidza kweropa.
Ndiwo musiyano mukuru pakati peiyo ephedrine uye Synephrine 5985-28, sezvo ephedrine inozivikanwa kumutsa zvese alpha-4 uye alpha-1 adrenoreceptors zvine simba.
Synephrine HCL inosimudzirawo neuromedin U2 receptors. Aya ndiwo mamorekuru ari mu hypothalamus uye ayo anowedzera wakeness.
Synephrine inoshanda nekumisa kugadzirwa kwe eotaxin-1. Ndiwo mamorekuru anoratidza eosinophils kuti aende kunzvimbo yakatsvinda. Iyo inovharidzawo iyo NADPH oxidase chiitiko, iyo inogadzirwa ne neutrophils uye nekudaro, inogadzira akawanda anoshanda eokisijeni marudzi.
(1) Synephrine HCL yehuremu
Mafuta akawandisa haangoori ngozi kune hutano, asi zvinogona kuita kuti iwe utarise. Kupisa mafuta kunouya nekubatsirwa kukuru, kusanganisira kuita kuti urarame kwenguva yakareba. Neraki, Synephrine HCL yekushandisa ndeimwe yemano mano akaedzwa aunogona kushandisa kuti anyungudise kure mafuta emuviri. Heano maitiro kuti anokubatsira iwe kuzadzisa ichi chinangwa;
Haufanire kuenda kumitambo yekumhanyisa uye unonzwa wakaneta uye wakarara; Synephrine akakuwana. Izvo zvinoshanda semafuta nekukudyisa iwe nesimba rese raunoda kuti uve nemhondi yekushandira Workout chikamu. Makonzo anotambirwa na Synephrine powder vanoonekwa kuti vakakwanisa kushambira kwenguva yakareba, vachiratidza kuti simba ravo rakawedzera.
Nekuvandudza simba mazinga, Synephrine inozivikanwa yekukwidziridza zvemitambo zvakare. Mhedzisiro yakasanganiswa yekuwedzera kwesimba kushandiswa kwemafuta uye kukurudzira inosimudzira mashandiro uye inowedzera huwandu hwechibodzwa chakawanikwa kubva kuiri aerobic uye anaerobic kurovedza muviri. Icho chinoita icho chikuru pre-Workout supplement uye a mafuta zvinopisa zvakare.
Ndiwo maitiro ekupwanya mafuta mumuviri. Inotsanangurwa zviri nani semetabolism. Synephrine inoshanda nekuwedzera imwe metabolic rate nekudaro ichigadzira imwe kupisa mafuta nekukurumidza. Iyo inotsanangura chikonzero nei kutora Synephrine kuchaita kuti iwe upise mafuta akawanda kubvira apo metabolism yakakwira, muviri wako unonyanya kukwanisa kusvika kune yakachengetwa mafuta kuti uwane yakawanda.
Synephrine HCL dosage inosiyana kubva pamunhu kubva kune mumwe. Nekudaro, iyo yakajairwa dosi kana kuora kurasikirwa powder ari 100mg pazuva. Tsvagiridzo, zvisinei, inoratidza kuti Synephrine HCL dosage ye35mg iri zvakare inoshanda. The Synephrine HCL dosage haifanire kunge ichidarika 200mg muzuva kuti udzivise huturu.
Nezve Synephrine bodybuilding athari kana seanopisa mafuta, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unozvitora chinhu chekutanga mangwanani nemaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu usati warovedza muviri. Zvinokurudzirwa kuti uende navo nemvura.
Ipo vamwe vanhu vangasarudza kutora Synephrine pachezvayo, vamwe vangangoda kuibika. Iwe unogona kuishandisa pamwe chete nemamwe uremu uremu powders uye zvakare ayo ayo anowedzera simba rako. Yohimbine inonamira zvakanaka neSyephrine, kunyanya kana chinangwa chako chikuru kuderedza uremu.
Pasina kupokana, Synephrine HCL ndiyo chiyera chitsvene chekurema uremu powders. Izvo zvinobatsira kudzvanyirira nzara yako kana iwe uine chinangwa chekudya zvishoma kana kuderedza kutora zvisina hutano chikafu. Iwe unogona kunyange kusarudza kuderedza kwako kudya ne Synephrine inowedzera kwemaawa makumi maviri nemana kana iwe uchida kupinda muchimiro nekukurumidza.
Kana ikashandiswa pamwe chete nekudya kwakanaka uye kurovedza muviri, iwe uchacherechedza Synephrine kuvaka muviri uye kurasikirwa uremu mukati memavhiki maviri ekushandiswa. Kune chero munhu ari kunetseka nekubvuta, kudya zvakanyanya, kana iye anonzwa sekunge vari kuda kubvisa imwe mafuta kubva mumiviri yavo, iyi ndiyo chibvumirano chaicho!
Zvino zvauri kutsunga kusvika pane zvinorema uremu, unowana kupi kupisa mafuta uku? Sezvo makambani akawanda angavimbisa kukupa iwe Synephrine yakanaka, iwe unofanirwa kuve wakangwarira sezvo vamwe vangikutengesa zvisinga fambe. Isu tinokupa kukosha kwemari yako nekukupa iwe Synephrine supplements yakachengeteka uye inoshanda. Kamwe iwe buy Synephrine kubva kwatiri, iwe unovimbiswa kuti iwe uchapisa mafuta uye kurasikirwa mafuta nekukurumidza uye zvachose.
Yedu yekuremerwa uremu inowedzerazve panjodzi-isina sezvo ivo vari 100% yechisikigo pasina akavanzika akawedzerwa Raira iyo 'chishamiso' kurema uremu hwepfu kubva kwatiri nhasi uye kurasikirwa mapaundi asingadiwe uye zvakare kunakidzwa kweSynephrine bodybuilding mapundu.
Iyo Hutano hwehutano hweNyowani kune Dietary Supplements, rakanyorwa na Shawn M. Talbott, Kerry Hughes, peji 13